Filtrer les éléments par date : vendredi, 28 février 2020
vendredi, 28 février 2020 23:08
Andranomanelatra – Antsirabe: Tovolahy mpiandry omby maty natelin’ny dobo nilomanosany
Ny omby nihahaka teny an-tanimbolin’olona no nanaitra ny tompon’omby raha tafaverina teo an-tanànan’i Bemololo, Kaominina Andranomanelatra, Distrika Antsirabe II, lalam-pirenena faha 7, androany zoma 28 febroary tolakandro, avy namangy marary teny Antsirabe.
Nantsointsoina ny anarany fa tsy nisy namaly. Natao ny fikarohana dia hita teo amoron’ny dobo iray, izay tanimbary nolavahana no nanamboarana azy, ny fitafiana sy ny kapa nanaovan’ilay tovolahy, niaraka tamin’ny japy na karavasy fiambenana omby.
Nino ireo mpampiasa azy sy ny Fokonolona fa nilomano tao ilay tovolahy ary mety rendrika ao. Natao avy hatrany ny fikarohana saingy maizina ihany ny andro nefa tsy mbola hita ilay zazalahy. Natsahatra ny fikarohana rehefa maizina ny andro ary hotohizana rahampitso vao maraina.
vendredi, 28 février 2020 22:42
Ahiahy coronavirus: Natoka-ponenana ny filohan’i Mongolie Khaltmaagiyn Battulga
Natoka-ponenana mandritra ny 14 andro i Khaltmaagiyn Battulga, filohan’i Mongolie, sy ny delegasiona notarihiny tonga avy any Chine, izay nipoiran’ny valanaretina coronavirus ary efa namono olona manodidina ny 2800 amin’izao fotoana izao.
Milaza ho ahitana soratr’aretina coronavirus ihany koa ny filoha lefitry ny Repoblika islamika Masoumeh Ebtekar. Natokam-ponenana ihany koa i Attilio Fontana, filohan’i Lombardie any Italia ; voa ihany koa ny minisitra lefitra iraniana misahana ny fahasalamana, Iraj Harirchi.
vendredi, 28 février 2020 22:40
Hetra tsy naloa: Nogiazan’ny fanjakana ny fananan’ny A&C Hôtel Ivato
Tonga teny A&C Hôtel Ivato androany zoma 28 febroary ny vadintany, nombana mpitandro ny filaminana, hampihatra didim-pitsarana ny hanagejana ny fananan’ny A&C Hôtel noho ny hetra tsy naloan’ity orinasa ity.
Mitentina 59 lavitrisa Ariary io hetra tsy voaloa amin’ny fanjakana io nandritra ny 5 taona, miampy sazy mitentina 20 lavitrisa Ariary. Hatao lavanty avy hatrany amin’ny 4 martsa ireo entana nogiazana ireo, aorian’ny fanaovana tombana azy ireo.
vendredi, 28 février 2020 19:00
Lisi-pifidianana: Miisa 1 162 512 ireo olom-pirenena manana laharana kara-panondrom-pirenena mitovy voarakitra ao
110 629 ireo anarana miverina in-droa na mihoatra, hita ao anaty lisi-pifidianana amin’izao fotoana izao, tamin’ny famaranana vonjimaika taorian’ny fanavaozana isan-taona natomboka tamin’ny 1 desambra 2019.
vendredi, 28 février 2020 18:55
Lisi-pifidianana: Nofaranana vonjimaika ary haverina eny amin’ny Fokontany farafahatarany ny 10 martsa 2020
Nofaranana vonjimaika androany manerana ny nosy eny anivon’ny CED ny lisi-pifidianana. Atonta ireo lisi-pifidianana nofaranana vonjimaika ireo ary haverina eny amin’ny Fokontany farafahatarany ny 10 martsa 2020.
Aorian’izay dia omen’ny lalàna 20 andro ny olom-pirenena hanaovana fanamarinana sy fanamarihana io lisi-pifidianana vonjimaika io. Hamarinina amin’izany ireo fahadisoana ara tsipelina, teo amin’ny fandikana, na ihany koa ireo nisy latsaka.
Averina eny anivon’ny CENI ireo kahie mirakitra ny fanamarihana ireo aorian’izay ary raketina anaty solosaina sy atonta indray ho an’ny 15 mey, daty voatondron’ny lalàna hamaranana tanteraka ny lisi-pifidianana.
vendredi, 28 février 2020 18:43
Vohémar: 0,01% fitomboan’ny taham-pisoratana anarana amin'ny lisim-pifidianana, tao no ambany indrindra
Ny Distrikan’i Vohémar, Faritra SAVA no manana fitomboan’ny taham-pisoratana anarana ambany indrindra (0,01%) taorian’ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana natomboka tamin’ny 1 desambra 2019. Ny Distrikan’i Morafenobe, Faritra Melaky kosa no manana fitomboan’ny taham-pisoratana anarana ambony indrindra : 8.47%.
Raha ny Faritra indray dia Ihorombe manana fitomboan’ny taham-pisoratana anarana ambany indrindra : 1.37% raha toa ka Atsimo andrefana no faritra manana fitomboan’ny taham-pisoratana anarana ambony indrindra : 3.84%.
Mahajanga kosa no Faritany manana fitomboan’ny taham-pisoratana anarana ambany indrindra : 1.54% raha toa ka ny Faritanin’i Toliara no manana fitomboan’ny taham-pisoratana anarana ambony indrindra : 3,06%.
vendredi, 28 février 2020 18:29
Lisi-pifidianana: 10 568 400 ny isan’ny mpifidy taorian’ny fanavaozana isan-taona natao
Nanomboka ny 1 desambra 2019 ny fanavaozana isan-taona ny lisi-pifidianana 2019-2020. Araka ny tatitra nataon’ny CENI androany dia 10 299 583 ny isan’ny mpifidy tao anaty lisi-pifidianana nialoha ny 01 desambra 2019.
412 151 ireo mpifidy vaovao, ireo vao feno 18 taona vao nahazo kara-panondro, miampy ireo tsy voasoratra anarana mihitsy tany aloha ary izao vao nisoratra anarana ary ireo mpifidy nifindra monina.
143 334 ireo mpifidy nesorina tsy ho ao anaty lisi-pifidianana. Ao anatin’izany ireo maty, ireo nomelohin’ny fitsarana ka very zo eo amin’ny sehatry ny fifidianana, ireo nifindra monina.
10 568 400 ny isan’ny mpifidy ao anaty lisi-pifidianana amin’izao fotoana izao taorian’ny famaranana vonjimaika, manome 2,61% ny tahan’ny fisondrotan’ny fisoratana anarana tao anaty lisi-pifidianana.
vendredi, 28 février 2020 18:26
Famatsiana rano an’Antananarivo: Nanome 73 tapitrisa euros ny Vondrona Eoropeana
Nitsidika ara-pomba fifanajana ny minisitra vaovao misahana ny Rano, ny Fanadiovana sy ny Fidiovana, Voahary Rakotovelomanantsoa, tetsy amin’ny birao fiasany etsy Ambohijatovo ambony omaly alakamisy 27 Febroary 2020, ny ambasadaoron’ny Vondrona Eorôpeana Giovanni Di Girolamo.
Voaresaka nandritra ny fihaonan’ny roa tonta ny fanamasina ny fiaraha-miasa eo amin'ny governemanta sy ny Vondrona Eorôpeana ny amin'ny fitsinjarana ny rano fisotro ny tananan'Antananarivo ka hanohana ara-bola hatrany amin’ny 73 tapitrisa euros ny tetikasa ny Vondrona Eorôpeana ; ary hisy 34 tapitrisa euros ho an’ny fanadiovana sy fidiovana ary ny fanadiovana.
Hanampy ny any atsimo amin'ny alalan'ny tetika mifandrimbona amin'ny sehatra hafa toy ny fambolena, fiompiana izay misy sehatry ny rano ihany koa ny Vondrona Eorôpeana.
vendredi, 28 février 2020 14:38
Tabera Randriamanantsoa: Lasa androany atsy Maorisy, manaraka fitsaboana
Niala androany misandratr’andro teto Madagasikara niazo ny nosy Maorisy mitsabo tena i Tabera Randriamanantsoa, adminisitratera sivily, minisitry ny asam-panjakana teo aloha ary filoha nasionalin’ny antoko Kintana sady mpandrindra ny CRN, rehefa notsaboina hahazo hery sy tanjaka tao amin'ny Hopitaly Miaramila Soavinandriana - Antananarivo.
Efa voaray ao amina toeram-pitsaboana tsy miankina (clinique) maurice izy zao. Mahatsiaro tena izy saingy mbola reraka vokatry ny ra very be loatra (hémorragie interne) taminy.
Nanamora ny fandefasana azy hanohy ny fitsaboan-tena atsy Maorisy ny fitondram-panjakana, ny Consulat de Maurice, ny namany rehetra nanampy sy nitondra am-bavaka.
vendredi, 28 février 2020 14:22
Coronavirus: Misy tranga roa mampiahiahy atsy Seychelles
Nanao fanambarana ny Antokon-draharaha momba ny fahasalamana atsy Seychelles, misy olona roa ahiahiana ho mitondra ny valanaretina COVID-19 na coronavirus ao an-toerana. Natokam-ponenana avy hatrany ao amin’ny hopitaly Anse Royale any atsimon’i Mahé renivohitra ireo olona ireo, eo ampiandrasana ny valin’ny fitiliana atao.
Mpivady teratany espaniôla ireto olona ahiahiana ireto. 64 taona ilay vehivavy, mifoka sigara ary mitovy fiseho amin’ny olona voan’ny COVID-19 ny fisefony. 69 taona ilay lehilahy, tsy nahitana soritr’aretina ity farany saingy noho ny fifampikasokasohana teo amin’izy ireo dia niara-natokam-ponenana avy hatrany aloha.
Nandray fepetra ry zareo Seiseloà nanomboka ny 26 febroary 2020 teo, fa tsy afaka miditra any Seychelles ireo olona mpandeha avy any Chine, Korea Atsimo, Italia ary Iran. Ireo teratany Seiseloà nahazo fahazoan-dalana ihany no mahazo miditra, saingy atokam-ponenana avy hatrany aloha mandritra ny 14 andro hanaraha-maso ara-pahasalamana.